Sarimihetsika hijerena alohan'ny handehanany any Roma hahalala ny tanàna | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | 26/04/2021 10:19 | Nohavaozina amin'ny 26/04/2021 10:23 | kolontsaina, General, Italia
Raha mikasa ny dianao mankany Italia ianao, eo anelanelany ny tanàna rehetra azonao tsidihina eto amin'ny firenena, Roma angamba fijanonana tsy maintsy atao amin'ny lalanao. Raha te hahita ireo sarimihetsika hojerena alohan'ny handehananao any Roma ianao, ny zavatra voalohany tokony horesahinay aminao dia ny Tanàna Mandrakizay dia nandray anjara betsaka tamin'ny tontolon'ny sinema. Ary ity amin'ny kasety dia apetraka amin'ny fiaviany sy amin'ny fikirakirany ankehitriny.
Mikasika ilay teo aloha, nisy karazana sarimihetsika iray aza namerina namorona an'i Roma kilasika: ny peplum. Ary, ny faharoa kosa, avy amin'ny Neorealism Italiana ho an'ny indostrian'ny Hollywood nifidy ny renivohitry Italia toy ny toerana hanatontosana ny horonantsariny. Saingy, tsy mila adim-potoana intsony, dia hasehonay anao ny sasany amin'ny sarimihetsika hijerena alohan'ny handehananao any Roma.
1 Sarimihetsika jerena alohan'ny handehanany any Roma: manomboka amin'ny peplum ka hatrany amin'ny sinema ankehitriny
1.2 'Fety any Roma'
1.3 'La dolce vita', kilasika iray hafa hita ao amin'ny sarimihetsika alohan'ny handehanany any Roma
1.4 'Diary malala'
1.5 'Roma, tanàna misokatra'
1.6 'Andro iray manokana'
1.7 'Ho an'i Roma amin'ny fitiavana'
1.8 'Ilay hatsarana lehibe'
1.9 'Accatone', sarin'ny tanàna ambanivohitra
Sarimihetsika jerena alohan'ny handehanany any Roma: manomboka amin'ny peplum ka hatrany amin'ny sinema ankehitriny
Araka ny efa nolazainay taminao, ireo sarimihetsika izay tokony ho hitanao alohan'ny handehanany any Roma dia mandray ny tanàna ho toerana iray. Fa, ankoatr'izay, maro amin'izy ireo no mahavita azy toetra iray hafa izay mitaona ary mamaritra ny ain'ny mpihetsiketsika mihitsy aza. Handinika ny sasany amin'ireo sarimihetsika isika.
Afisy ho an'ny 'Ben-Hur'
Raha miresaka momba ny karazana sinematografika an'ny peplum isika, ity blockbuster Hollywood ity dia iray amin'ireo santionany tsara indrindra. Notanterahin'ny William wyler ary starring Charlton heston, Stephen boyd, Jack hawkins y Haya Harareet, dia miorina amin'ny tantara an-tsary tsy fantatra anarana nataon'i Lewis wallace.
Ny horonantsary dia manomboka any Jodia amin'ny taona XNUMX amin'ny vanim-potoana misy antsika. Ilay aristokrat Judá Ben-Hur ampangaina amin'ny tsy ara-drariny ho fanoherana ny Romana izy ary voaheloka higadra. Rehefa avy nihaona tamin'i Jesosy Kristy sy nandia fahasamihafana maro dia tonga tao Roma niova fo ho mpanankarena sy mpifaninana amin'ny hazakazaka kalesy. Nefa tanjona iray ihany no tanjony: ny hamaly faty an'i Mesala sakaizany taloha, tompon'andraikitra tamin'ny fanagadrana ny reniny sy ny rahavaviny.
'Ben-Hur' dia nanana tetibola dimy ambin'ny folo tapitrisa dolara, lehibe indrindra amin'ny sarimihetsika hatramin'izay. Mpiasa maherin'ny roanjato no niasa tamin'ny fanamboarana ny haingon-trano misy azy, izay nahitana sary vongana sy friezy an-jatony. Toy izany koa, mpanjaitra zato no niandraikitra ny famoronana akanjo. Y ny sehatry ny hazakazaka kalesy Izy io dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny tantaran'ny sinema.
Nisokatra tao New York ny sarimihetsika tamin'ny 18 Novambra 1959 ary lasa sarimihetsika faharoa farany ambony indrindra taorian'i 'Gone with the Wind'. Toy ny hoe tsy ampy izany dia nahazo Oscars iraika ambin'ny folo, ao anatin'izany ny sary tsara indrindra, talen'ny tsara indrindra ary mpilalao sarimihetsika tsara indrindra. Na izany na tsy izany dia mbola heverina ho iray amin'ireo sarimihetsika tsara indrindra amin'ny tantaran'ny sinema izy io.
'Fety any Roma'
Plaza de España, toerana iray amin'ireo sehatra malaza indrindra amin'ny 'Holiday Holours' nalaina sary
Sarimihetsika iray hafa notarihin'i William wylerNa dia manana lohahevitra tena hafa aza izy io dia iray amin'ireo sarimihetsika jerena ihany koa alohan'ny handehanany any Roma. Amin'ity tranga ity dia hatsikana hatsaram-panahy tantaram-pitiavana Audrey Hepburn y Gregory peck. Ny voalohany dia Anna, Andriambavy izay, rehefa nandositra ny mpanotrona azy, dia nandany andro sy alina tao an-tanàna toy ny Romanina rehetra.
Notifirina tao amin'ny studio studio malaza Cinecittá, akaikin'ny renivohitra Italiana io. Voatendry ho an'ny Academy Award fito, nandresy telo izy anisan'izany ny mpilalao sarimihetsika tsara indrindra ho an'i Audrey tsy hay hadinoina. Toy izany koa, ny seho toa ilay misy mpilalao protagonist roa eo amin'ny tohatry ny Kianjan'i Espana na ny an'ny fitsangatsanganana moto dia nidina tao amin'ny tantaran'ny sinema.
'La dolce vita', kilasika iray hafa hita ao amin'ny sarimihetsika alohan'ny handehanany any Roma
Sehatra malaza indrindra avy amin'ny 'La dolce vita'
Nosoratana sy notarihin'i Federico Fellini Tamin'ny 1960, dia niara-nitehaka ihany koa izy ho iray amin'ireo kilasika amin'ny tantaran'ny sarimihetsika. Nalefa praiminisitra tao amin'ny Cannes Film Festival tamin'io taona io ary nomena ny Rofia volamena, na dia tsy dia nanam-bintana firy aza izy tao amin'ny Oscars satria izy ihany no nanana ilay endrika famolavolana akanjo tsara indrindra.
Ireo mpiandany aminy dia Marcelo mastroianni, Anita ekberg y Anouk Aimée. Ity tetika ity dia mitantara tantara tsy miankina maro izay ny rohy iraisana dia ny tanànan'i Roma mihitsy sy ny manodidina azy. Amin'ity tranga ity dia ho hitanao koa ny seho iray tsy hay hadinoina: ny an'ny mpiorina mahery fandroana ao amin'ny Trevi Fountain.
Nanni Moretti, talen'ny 'Gazety malala'
Sarimihetsika autobiografia izay ahitana ny talen'ilay mpitarika azy, Nani Moretti, mitantara ny zavatra niainany tao amin'ny Tanàna Mandrakizay. Izy io dia misy fizarana mahaleo tena telo ary manambatra hatsikana miaraka amin'ny fanadihadiana. Navoaka tamin'ny 1993 ary, ny taona manaraka, dia nahazo ny Rofia volamena ao amin'ny Cannes ary koa ny loka ho an'ny talen'ny tsara indrindra.
Fantatra tokoa ireo seho nitetezan'ilay mpihetsiketsika ny tanàna tao ambadiky ny Vespa nanazavany ny antony itiavany ny manodidina toa ny Tetezana Flaminio o Garbatella. Raha te-hahazo vaovao momba ireo faritra tsy dia fantatra sy afovoan'i Roma ianao dia amporisihinay ianao hijery ity sarimihetsika ity.
'Roma, tanàna misokatra'
Seho iray avy any 'Roma, ilay tanàna malalaka'
Tsy dia tsara fanahy loatra ity sarimihetsika ity Roberto Rosellini premiered in 1945. Niorina tamin'ny Ady Lehibe Faharoa, mitantara tantara maromaro izay manana ny maha izy azy ny fanoherana ny Nazia.
Na izany aza, iray amin'ireo mpandray anjara fototra dia ny pretra ray Pietro, izay niafara notifirin'ny Alemanina ary fandikana ny Luigi morosini, mpitondra fivavahana nanampy ny fanoherana ary nampijaliana sy novonoina ho azy.
Toy izany koa, ny anjara asan'ny Mananasy, vehivavy nilalao Ana Magnani. Miaraka amin'izany, ny mpilalao dia Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Nando Bruno, Harry Feist ary Giovanna Galletti. Taratasy fandefasana sarimihetsika ity ka nisy olana tamin'ny sivana aza. Ho setrin'izany dia nahazo ny Rofia volamena tamin'ny Fetiben'ny Sarimihetsika Cannes.
'Andro iray manokana'
Marcelo Mastroianni, kintan'ny 'Andro iray manokana' miaraka amin'i Sofía Loren
Marcello mastroianni y Sophia Loren Niara-niasa tamin'ny sarimihetsika maromaro izy ireo, saingy ity no iray amin'ireo tsara indrindra. Napetraka tamin'ny taona XNUMX izy, raha teo am-piomankomanana tanteraka ny fasista, ary lasa sary mitsikera ny fiarahamonina Italiana tamin'izany fotoana izany.
Mastroianni milalao mpampiantrano radio iray voaroaka noho ny maha-pelaka azy ary i Loren kosa milalao vehivavy manambady ofisialin'ny governemanta Nifandray tamina fifandraisana izy roa rehefa sendra nihaona izy roa satria samy tsy nanatrika ny matso ho fanomezam-boninahitra an'i Hitler ny 1938 Mey XNUMX.
Ny talen'ny horonantsary dia Ettore Scola, izay niara-niasa tamin'ny script ihany koa. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra azy dia mitana andraikitra manohana ny sarimihetsika izy Alessandra mussolini, zafikelin'ny mpanao didy jadona fasisista. Nahazo mari-pankasitrahana marobe, nahazo fanendrena Oscar roa: mpilalao sarimihetsika tsara indrindra sy sarimihetsika miteny vahiny tsara indrindra, na dia tsy nahazo fandresena aza izany tamin'ny farany.
'Ho an'i Roma amin'ny fitiavana'
Roberto Benigni, iray amin'ireo mpandray anjara tamin'ny 'A Roma con amor'
Vao haingana kokoa ity sarimihetsika notarihin'i Woody Allen, araka ny namoahana azy tamin'ny 2012. comédie romantika iray izay milaza tantara efatra izay ny City Eternal no toerana misy azy ary mifototra amin'ny lohahevitry ny fanatanterahana manokana sy ny lazany. Iray amin'ireo mpandray anjara fototra, mpamokatra mozika antsoina hoe Jerry, nolalaovan'i Allen tenany.
Ny hafa kosa dia Jack, mpianatra maritrano izay efa lalaovin'i Jesse eisenberg; Leopoldo, lehilahy tsy fantatra anarana izay lasa fifantohan'ny media tampoka ary maneho ny endriny Roberto Benigni, sy Antonio, anjara asany Alessandro tiberi. Miaraka amin'izy ireo, miseho i Penelope Cruz, Fabio Armilato, Antonio Albanese ary Ornella Muti.
'Ilay hatsarana lehibe'
Toni Servillo, kintan'ny 'The great hats'
Contemporary amin'ilay teo aloha, araka ny namoahana azy tamin'ny 2013, dia ity sarimihetsika notarihin'i Paolo Sorrentino, izay nanoratra ilay script teo anilany koa Umberto Contarello. Ary misy fomba fanao ihany koa io.
Ao amin'ny Roma iray ravan'ny ferragosto, ilay mpanao gazety sady mpanoratra sorena Jep Gambardella Izy io dia mifandraika amin'ny endri-tsoratra isan-karazany amin'ny sehatra sosialy avo. Mpisolovava, mpanao politika, mpanao heloka bevava fotsy, mpilalao sarimihetsika ary olon-kafa no mamorona ity teti-dratsy ity izay miseho ao amin'ireo lapa be sy villa be voninahitra.
Ny sarimihetsika dia kintana Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina ferilli, Galatea ranzi y Carlo Buccirosso, ankoatry ny mpandika teny hafa. Tamin'ny 2013 dia nomena ny Rofia volamena Cannes ary, fotoana fohy taorian'izay, niaraka tamin'ny Oscar ho an'ny sarimihetsika miteny vahiny tsara indrindra. Fa ny tena zava-dehibe dia ny fanavaozana ny tetika 'La dolce vita', izay efa noresahinay taminao.
'Accatone', sarin'ny tanàna ambanivohitra
Pier Paolo Pasolini, talen'ny 'Accatone'
Ity lisitry ny horonantsary hijerena ity alohan'ny handehanany any Roma dia tsy tokony ho diso iray notantanin'i Pier Paolo Pasolini, iray amin'ireo manam-pahaizana mahalala tsara ny fomba hakana ny votoatin'ny Tanàna Mandrakizay, marina fa voasivana tamin'ny fomba fijeriny manokana.
Azonay atao ny milaza aminao momba ny sarimihetsika marobe, saingy nofidininay ity iray ity satria sarin'i Roma an-tsisiny. Accatone dia pimp avy any ambanivohitra izay tsy mitsahatra ny mosary, toy ny vondrona namany. Mahay manao na inona na inona alohan'ny asa, dia manohy mitory foana izy ary mahita vehivavy vaovao hararaotiny.
Araka ny hitanao amin'ny teti-dratsy, dia sary masiaka amin'ny tontolo ambanin'ny Romanina tamin'ny taona XNUMX izany. Misotroa avy Neorealism Italiana ary adika amin'ny Franco Citti, Silvana Corsini, Franca Pasut y Paola Guidi ankoatry ny mpandika teny hafa. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra, dia holazainay aminao izany Bernardo Bertolucci niasa tamina mpanampy mpanampy tamin'ny sarimihetsika izy.
Ho famaranana, nasehonay anao ny sasany amin'ireo sarimihetsika jerena alohan'ny handehanany any Roma. Izy ireo dia ampahany solontenan'ireo rehetra manana ny Eternal City ho sehatra na ho protagonista iray aza. Raha ny marina dia azontsika lazaina ny hafa toa 'Anjely sy demonia'nataon'i Gregory Widen; 'Ny alin'ny Cabiria'nataon'i Federico Fellini; 'Beautifull'nataon'i Luchino Visconti na 'Mihinàna mivavaka fitiavana'avy amin'i Ryan Murphy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Sarimihetsika 9 hijerena alohan'ny handehanany any Roma
Lovia mahazatra 7 any Mexico izay tsy maintsy andramanao